Apho Ukuze Jonga 'Umdla Street Art EYurophu | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > Apho Ukuze Jonga 'Umdla Street Art EYurophu
Ixesha lokuFunda: 4 imizuzu(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 15/01/2020)
art Street luhlobo mihla zokuvakalisa ezobugcisa eyenza izixeko zethu ezintle kakhulu. A mzobo olungileyo isitalato Kwakhona ayasivuselela ukuba ucinga ngento ebaluleke ngokwentlalo okanye kunikhumbuza imisebenzi yeenkosi yamandulo.
Cities of Europe azele iindawo ezinkulu niphuphuma art esitalatweni kunye graffiti. Ungathatha elide uhamba nge ezitratweni nemibuzo imizobo ze uthole nesithukuthezi. Nazi ezinye umdla zobugcisa esitratweni apho kubona eYurophu:
Street Art eLondon
London yenye imizi nomtsalane kwabo ukwazisa wena esitalatweni kunye nabadlali ngokwabo. Phakathi ezitratweni ungatyelela ukufumana yedosi yakho art fantastic, Camden and Shoreditch ume ngaphandle. kunjalo, Brick Lane kunye Southbank ayaziwa oya kuyo, kakhulu. kunjalo, Ukuba ukhangela indawo edume, intloko ku Shoreditch.
IParis igcwele sitrato wena iindawo ezishushu, njengoko ngokufuthi olungu izitalato yonke. Head ukuya arrondissements 10 and 11 ngokusebenzisa nezenxina Saint-Maur. Yinto egcwele Apha ndingumhambi Fairey portraits ezimnyama-mhlophe ezindongeni zezakhiwo, leyo eyenza kube uhambe enkulu. Oku 2km isitalato elide yekhampasi yeConfederations Oberkampf, indawo umdla ngokwembono art street.
Berlin ka-East Side Gallery yenye yeendawo eziphambili ehlabathini abo abakuthandayo art ezidolophini. Esi sixeko unalo banabileyo scene art street, mhlawumbi olubonakala kakhulu Kreuzberg and Mitte. Kukho izithili ezimbini kunye alleyways ebukekayo yangaphakathi eziqwenga art street lenkundla. Head ukuya empuma kwisithili Kreuzberg ukufumana zobugcisa best.
Street Art in eRoma
eRoma iye yaba indlela lengxondorha ukwamkela art street, kodwa lo mzi nentle ngoku ekugqibeleni sivumele ubuhlakani zobugcisa wedolophu ukuba aveze. Kukho kwizithili ezimbalwa apho art street iye kancane lunempembelelo. kunjalo, indawo engcono kutyelela kunokuba San Lorenzo, ebumelwaneni intabalala graffiti oludlamkileyo. Ukuba Sityelele neRoma ukhangela amahle zobugcisa street, ukugxila Via Enotri, via Ausoni, Via dei Sardi kunye neVia Dei Sabelli.
Graffiti e Frankfurt
Frankfurt sisixeko omnye umntu alindele ukuyifumana kuluhlu ngenxa Umthandi art street, njengoko unalo igama omhle kakhulu ngokuba ishishini ingumasipala. kunjalo, umntu athi nezixeko ezifana nezinto ezithandwa nokuba libinzana elinamandla zobugcisa street, ubukhulu becala imvukelo ngexabiso eliphezulu zokuphila. Frankfurt has a lot of zobugcisa street emhlabeni Isikhululo sikaloliwe kunye kwesixeko. I Hall of Lodumo kwi Ratswegkreisel enye indawo elungileyo ukuze ukuhambela.
ndawo art street Amsterdam kaThixo sinamandla kakhulu, kunye nobugcisa lwedolophu lize nemiboniso museum. Iindawo eziphambili Amsterdam ngenxa yobugcisa street unguye Spuistraat, Wijdesteeg, no NDSM, kuquka iindawo umbindi wesixeko. Unakho ukuthatha uhambo lobugcisa yesitalato ukusuka Station Amsterdam Central. Isibakala sokuba eli hambo ikhona likuxelela ngokwaneleyo malunga nendlela abanekratshi lo mzi ngenxa ngobugcisa street.
Copenhagen ngumzi omkhulu ukuba unqwenela ukubona ezinye nemibala kunye nobuchule zobugcisa isitalato - nokuba kumakhaya abantu! Christiania kulapho uza kufumana imisebenzi emihle abaculi ezidolophini anetalente, ngoko qiniseka ukuba miss it.
Ukuba sele ukulungele ukubona okuhle zobugcisa street iYurophu ukuba anikele; yonke le mizi zifikeleleka lula ngololiwe. Incwadi amatikiti zakho ngexesha nokulungiselela ukuba ukwazi!
Ingaba ufuna kuzakulungisa post yethu blog kwi sayithi yakho, ungakwazi noba uthathe iifoto zethu kunye nombhalo kunye nje zisinika ngetyala ngekhonkco kule post blog, okanye cofa apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ffascinating-street-art%2F- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
Copenhagen Frankfurt graffiti London Street Art travelamsterdam umhambi travelparis travelrome